Ɛyɛ Wo Dɛ Sɛ Yehowa Ani Wɔ Wo So? | Adesua
“Yehowa aniwa wɔ baabiara; ɛhwɛ abɔnefo ne apapafo nyinaa.”—MMEB. 15:3.
NSƐNTITIRIW A ƐSƐ SƐ WOKAE
Adɛn nti na Yehowa ani wɔ wo so?
Ɔkwan bɛn na Yehowa fa so bɔ wo kɔkɔ, ɔteɛ wo so, na ɔkyerɛ wo kwan?
Adɛn nti na ɛtɔ da bi a Yehowa mfa ne ho nnye yɛn haw mu?
1, 2. Yehowa ani wɔ yɛn so, nanso ɛnte sɛ afiri a wɔde hwɛ nea nnipa reyɛ. Adɛn ntia?
SƐ WOKƆ aman pii so a, aban no de mfiri asisi mmeae horow a wɔde hwɛ nea ɛrekɔ so. Ɛma wohu kar a ɛredi akɔneaba ne akwanhyia a esisi. Sɛ drɔbani bi de kar bɔ obi na oguan a, mfiri no bɛboa polisifo ma wakyere no. Mfiri yi nti, ɛyɛ den sɛ obi bɛyɛ bɔne na wafa ne ho adi.
2 Bible ka sɛ Yehowa ani “wɔ baabiara.’ (Mmeb. 15:3) Ɛnde, eyi kyerɛ sɛ Yehowa te soro a nea ɔyɛ ara ne sɛ ɔde n’ani di yɛn akyi hwɛ nea yɛreyɛ biara anaa? Ɔde n’ani to rehwɛ yɛn sɛ yebebu ne mmara so na watwe yɛn aso anaa? (Yer. 16:17; Heb. 4:13) Ɛnte saa koraa! Mmom Yehowa ani wɔ yɛn so efisɛ ɔdɔ yɛn mu biara na ɔpɛ sɛ esi yɛn yiye.—1 Pet. 3:12.
3. Nneɛma anum bɛn na yɛrebesusuw ho?
3 Dɛn na ɛbɛma yɛahu sɛ ɔdɔ nti na Onyankopɔn ani wɔ yɛn so? Momma yɛnhwɛ nneɛma anum a ɛma yetumi ka sɛ ɔdɔ nti na Onyankopɔn ani wɔ yɛn so. (1) Ohu sɛ yɛretɔ kɔ bɔne so a ɔbɔ yɛn kɔkɔ. (2) Sɛ yetu anammɔn bɔne bi a, ɔteɛ yɛn so. (3) Ɔde Bible mu afotusɛm kyerɛ yɛn kwan. (4) Yɛkɔ ahohia mu a, ɔboa yɛn. (5) Ohu adepa wɔ yɛn ho a, ohyira yɛn.
ONYANKOPƆN BƆ YƐN KƆKƆ
4. Adɛn nti na Yehowa bɔɔ Kain kɔkɔ sɛ ‘bɔne butuw n’abobow ano’?
4 Nea edi kan no, momma yɛnhwɛ ɔkwan a Onyankopɔn fa so bɔ yɛn kɔkɔ bere a wahu sɛ yɛretɔ kɔ bɔne so no. (1 Be. 28:9) Momma yɛmfa Kain asɛm no nyɛ nhwɛso. Bere a Yehowa poo Kain afɔre no, ne “bo fuwii denneennen.” (Monkenkan Genesis 4:3-7.) Yehowa huu saa no, ɔbɔɔ Kain kɔkɔ sɛ ‘ɔnsakra nyɛ papa’ anyɛ saa a ‘bɔne butuw n’abobow ano’ retwɛn no. Onyankopɔn bisaa no sɛ: “Adɛn na wunni no so?” Na Onyankopɔn pɛ sɛ Kain tie no na ‘n’anim ba nyam.’ Sɛ Kain tiee Onyankopɔn a, anka obenya n’anim dom.
5. Ɔkwan bɛn na Yehowa fa so bɔ yɛn kɔkɔ?
5 Ɛnnɛ nso ɛ? Yehowa ani hu nea ɛwɔ yɛn komam tɔnn. Yɛn adwene ne yɛn nsusuwii nyinaa onim; yɛrentumi mfa nsie no. Onyankopɔn yɛ agya a ɔdɔ yɛn na ɔpɛ sɛ yɛyɛ nea ɛteɛ bere nyinaa, nanso ɔnhyɛ yɛn. Sɛ ohu sɛ yɛretɔ kɔ bɔne so a, ɔbɔ yɛn kɔkɔ. Ɔkwan bɛn so? Da biara a yɛbɛkan Bible anaa asafo nhoma anaa yɛbɛkɔ asafo nhyiam no, yenya asɛm bi a ɛboa yɛn ma yɛkwati nsusuwii bɔne. Woakenkan biribi anaa woate afotusɛm bi a ɛboaa wo ma wudii ɔhaw bi so? Eyi nyinaa yɛ kɔkɔbɔ a efi Yehowa hɔ, na ɔde ma yɛn ne bere mu.
6, 7. (a) Adanse bɛn na ɛwɔ hɔ a ɛkyerɛ sɛ Yehowa dwen ne somfo biara ho? (b) Wobɛyɛ dɛn anya Yehowa kɔkɔbɔ so mfaso?
6 Kɔkɔbɔ a Yehowa de ma yɛn yi nyinaa yɛ adanse a ɛkyerɛ pefee sɛ ɔdɔ yɛn na n’ani ku yɛn mu biara ho. Ɛyɛ nokware, wɔankyerɛw Bible no amma wo nkutoo; ɛwɔ hɔ fi teteete. Saa ara na Onyankopɔn ahyehyɛde no yɛ nhoma ma nnipa mpempem pii; wɔnyɛ mma wo nko ara. Bio nso sɛ yɛkɔ Kristofo nhyiam a, wotu asafo mũ no nyinaa fo. Nanso eyi nyinaa mu no, yebetumi aka sɛ Yehowa ani wɔ wo so na ɔtwe w’adwene si n’Asɛm so de siesie wo. Eyi nyinaa kyerɛ sɛ Yehowa dwen wo ho.
Yɛde Bible tete yɛn ahonim a, ɛbɛboa yɛn ma yɛakwati asiane ahorow (Hwɛ nkyekyɛm 6, 7)
77 Yɛbɛyɛ dɛn anya Onyankopɔn kɔkɔbɔ so mfaso? Nea edi kan, ɛsɛ sɛ yehu sɛ odwen yɛn ho. Afei ɛsɛ sɛ yegye n’Asɛm tom na yɛde yɛ adwuma. Enti sɛ yɛwɔ nsusuwii bi a Onyankopɔn ani nnye ho a, ɛsɛ sɛ yetu ase ntɛm. (Monkenkan Yesaia 55:6, 7.) Sɛ Yehowa tu yɛn fo na yetie a, yɛbɛkwati ɔhaw pii. Ɛnde, sɛ yedi mfomso bi nso ɛ? Mmoa bɛn na yɛn soro Agya no wɔ ma yɛn?
8, 9. Sɛ obi tu yɛn fo a, adɛn nti na yebetumi aka sɛ ɛyɛ adanse a ɛkyerɛ sɛ Yehowa dwen yɛn ho na n’ani wɔ yɛn so? Ma nhwɛso.
8 Sɛ yedi mfomso na Yehowa teɛ yɛn so a, ɛkyerɛ sɛ odwen yɛn ho. (Monkenkan Hebrifo 12:5, 6.) Ɛwom, sɛ wɔteɛ obi so a, ɛnyɛ no dɛ. (Heb. 12:11) Nanso sɛ obi teɛ yɛn so a, ɛsɛ sɛ yehu adwene a onii no de reyɛ saa. Ɛnyɛ adwene no ne sɛ obegu yɛn anim ase anaa ɔbɛhyɛ yɛn aniwu, na mmom ɔpɛ sɛ yɛkwati biribi a ebetumi asɛe yɛne Yehowa ntam. Enti ɔtɔ ne bo ase de Bible boa yɛn ma yɛsesa yɛn akwan yɛ nea Onyankopɔn pɛ. Ɛsɛ sɛ yɛkae sɛ Yehowa hɔ na afotu no fi, na yɛn asɛm hia no sen obi foforo biara.
9 Sɛnea Yehowa dwen yɛn ho no, saa ara na yɛn nuanom a wotu yɛn fo no nso dwen yɛn ho. Nhwɛso bi ni: Ansa na onua bi rebegye nokware no, na ɔtaa hwɛ aguamansɛm, nea wɔfrɛ no ponografi anaa pono no. Ɔbɔɔ mmɔden dii subammɔne no so, nanso ɛwom ara a na ɛyɛ no sɛ ɔnkɔhwɛ. Bere a ɔtɔɔ fon foforo no, na akɔyɛ sɛ gya a wasan aka asɔ ano. (Yak. 1:14, 15) Ofii ase hwɛɛ pono wɔ Intanɛt so bio. Da bi na ɔredi nkurɔfo adanse wɔ tɛlɛfon so. Ogu so no, ɔde ne fon maa ɔpanyin bi sɛ ɔnhwehwɛ address bi wɔ so. Bere a ɔpanyin no remiamia fon no so no, nneɛma a ohui daa no adi sɛ onua no de hwɛ pono. Ntɛm ara ɔpanyin no tuu no fo ma ohuu asiane a ɛwom. Onua no brɛɛ ne ho ase gyee nteɛso toom, na akyiri yi koraa otumi dii saa mmerɛwyɛ no so. Eyi kyerɛ sɛ yɛn soro Agya no hu bɔne a ahintaw na ɔteɛ yɛn so ansa na nneɛma agye nsam. Momma yɛnna Yehowa ase sɛ odwen yɛn ho saa.
SƐNEA BIBLE MU AFOTUSƐM BOA YƐN
10, 11. (a) Dɛn na ɛbɛkyerɛ sɛ ‘yɛahu Onyankopɔn yɛn akwan nyinaa mu’? (b) Ɔkwan bɛn so na abusua bi de Yehowa akwankyerɛ yɛɛ adwuma?
10 Odwontofo no too dwom, na ɔka kyerɛɛ Yehowa sɛ: “W’afotu na wode bɛkyerɛ me kwan.” (Dw. 73:24) Sɛ yehia akwankyerɛ na yɛdan kɔ Onyankopɔn Asɛm so a, ɛkyerɛ sɛ ‘yɛahu no yɛn akwan nyinaa mu.’ Bible ma yehu Yehowa adwene, na yɛde mu afotu yɛ adwuma a, ɛka yɛn bɛn yɛn soro Agya no. Bio, Bible boa yɛn ma yehu sɛnea yɛbɛhwɛ yɛne yɛn mmusua.—Mmeb. 3:6.
11 Yɛwɔ adanse a ɛkyerɛ sɛ Yehowa kyerɛ ne nkurɔfo kwan. Na onua bi ne ne yere ne ne mma te Philippines mantam baabi a wɔfrɛ hɔ Masbate. Ná wɔte obi asase so yɛ kuadwuma. Na wɔn mma dɔɔso nanso na ɔne ne yere nyinaa yɛ daa akwampaefo. Da bi wonyaa krataa fii asasewura no hɔ sɛ wontu mfi asase no so. Wɔn bɔne ne sɛn? Na obi atwa atoro ato wɔn so sɛ wɔnyɛ anokwafo. Ɛhe na onua yi ne n’abusua bɛfa? Na asɛm no haw no, nanso ɔkae sɛ: “Yehowa bɛkyerɛ. Daa ɔhwɛ yɛn, enti yenim sɛ nea ebesi biara ɔbɛhwɛ yɛn.” Yehowa amma onua no nsa ansi fam. Nna kakra bi akyi no, asasewura no ka kyerɛɛ wɔn sɛ wɔntena wɔn baabi. Dɛn na ɛma ɔsesaa n’adwene? Asasewura no hyɛɛ no nsow sɛ ntwatoso yi nyinaa akyi no, Adansefo yi maa Bible mu afotusɛm kyerɛɛ wɔn kwan; wɔdaa obu adi na wɔne obiara tenaa kama. Suban a abusua yi daa no adi no kaa asasewura no maa ɔsan de asase no bi mpo kaa wɔn ho. (Monkenkan 1 Petro 2:12.) Eyi ma yehu sɛ ampa Yehowa nam n’Asɛm no so boa yɛn wɔ ahohia bere mu.
ADAMFO A ƆBOA YƐN WƆ YƐN AHOHIA MU
12, 13. Tebea bɛn na ɛbɛma ebinom aka sɛ gyama Onyankopɔn nhu wɔn haw?
12 Ɛtɔ da bi a na akɔyɛ sɛ ɔhaw bi aba atenaseɛ. Ebia na yare koankorɔ bi abɛsoɛ yɛn, anaa abusuafo resɔre tia yɛn, anaa yɛrehyia ɔtaa bi. Ɛtɔ da mpo a na nsɛmnsɛm bi wɔ yɛne asafo no muni bi ntam, anaa yɛne n’adwene nhyia koraa wɔ biribi ho. Eyi nyinaa betumi ama yɛn ho ahiahia yɛn.
13 Ebia onua bi bɛka biribi ma ahye wo paa. Anhwɛ a wobɛka wɔ wo tirim sɛ: ‘Onyankopɔn asafo mu paa na eyi rekɔ so?’ Wobɛhwɛ mpo na onua no anya hokwan pii wɔ asafo no mu, na obiara nso bɔ no din pa. Ebia wobɛka sɛ: ‘Dɛn koraa na ɛrekɔ so yi? Enti Yehowa nhu anaa? Da bɛn na ɔbɛkeka ne ho?’—Dw. 13:1, 2; Hab. 1:2, 3.
14. Dɛn nti na ɛtɔ da a Onyankopɔn mfa ne ho nnye yɛn haw mu?
14 Yehowa hu nneɛma kɔ akyiri sen yɛn, enti onim nea enti a ɔmfaa ne ho nnyee asɛm no mu. Ebia wobɛka sɛ obi aka asɛm bi atia wo, nanso Onyankopɔn ani so no, ebia ɛnyɛ saa na asɛm no te. Wobɛhwɛ mpo na asɛm no fã kɛse no ara fi wo. Wo deɛ hwɛ, ɛyɛ afotu na na onua no de rema wo anaa? Wunsusuw sɛ anka ɛsɛ sɛ wotɔ wo bo ase susuw ho? Onua Karl Klein suahu betumi aboa yɛn. Onua yi bɛyɛɛ Akwankyerɛ Kuw no muni, na bere a ɔreka ne suahu no, ɔkae sɛ bere bi Onua J. F. Rutherford kaa n’anim. Ɛno akyi Onua Rutherford hyiaa no kyiaa no fɛfɛɛfɛ sɛ: “Karl, ɛte sɛn?” Nanso Onua Klein de ne menem na egyee so. Onua Rutherford hui sɛ Onua Klein afa ne ho abufuw, enti ɔbɔɔ no kɔkɔ sɛ ɔnhwɛ ne ho yiye na wantɔ Ɔbonsam afiri mu. Akyiri yi Onua Klein ankasa kyerɛw sɛ: “Ɛtɔ da a onua bi de afotu bɛma yɛn, na wobɛhwɛ mu no na ɛyɛ asɛm a odi ka. Sɛ ɛba saa na yenya ne ho menasepɔw a, na yɛrekeka kɔ Ɔbonsam afiri ho.” *
15. Sɛ yɛkɔ ahohia mu a, dɛn na ɛsɛ sɛ ɛtena yɛn adwenem?
15 Sɛ yɛkɔ ahohia mu a, nea yɛpɛ ara ne sɛ ɔhaw no befi yɛn so ntɛm. Nanso ɛsɛ sɛ yenya abotare. Adɛn ntia? Ma yɛnyɛ mfatoho bi. Fa no sɛ woreka kar na woakodu baabi a kar abɔ apee so, enti wugyina faako. Wunnim bere tenten a wode begyina hɔ. Sɛ woannya abotare na woyɛ w’adwene sɛ wobɛkɔ akɔfa baabi foforo a, anhwɛ a wobɛyera. Ebewie ase no na woasɛe bere pii. Sɛ wunyaa abotare twɛnee a, ebia anka ɛremma saa. Yɛn nso sɛ yehyia ɔhaw bi a, ehia sɛ yenya abotare na yɛfa ɔkwan a Onyankopɔn Asɛm abɔ ato hɔ no so. Ɛno na ɛbɛboa yɛn ma yɛatumi agyina yɛn haw ano.
16. Sɛ yɛkɔ ahohia mu a, adɛn nti na ebia Yehowa remfa ne ho nnye mu ntɛm?
16 Yɛkɔ ahohia mu a, ɛnyɛ bere nyinaa na Yehowa de ne ho gye mu. Ebia ɔpɛ sɛ ɛhyɛ yɛn baninha. (Monkenkan 1 Petro 5:6-10.) Eyi nkyerɛ sɛ ɔno na ɔma yɛkɔ ahohia mu. (Yak. 1:13) ‘Yɛn tamfo Bonsam’ na ɔde ɔhaw dodow no ara ba yɛn so. Ɛno mpo no, ebia Onyankopɔn bɛma kwan ma yɛafa saa tebea no mu na ahyɛ yɛn den. Yɛn amanehunu nyinaa Yehowa ani tua, na esiane sɛ ‘odwen yɛn ho’ nti, ɔremma ahohia no ntena yɛn so daa. Ɛnde, sɛ wokɔ ahohia mu a, wuhu sɛ Yehowa dwen wo ho na n’ani wɔ wo so? Wowɔ awerɛhyem sɛ ɔbɛhyɛ wo den ma woagyina mu?—2 Kor. 4:7-9.
17. Adɛn nti na Yehowa hwehwɛ obiara komam?
17 Ade titiriw bi paa nti na Onyankopɔn hwehwɛ yɛn koma mu. Ɔmaa ne diyifo Hanani kɔka kyerɛɛ Ɔhene Asa sɛ: “Yehowa de, n’aniwa kyini asase so baabiara sɛ ɔde n’ahoɔden bedi ama wɔn a wɔn koma di mũ wɔ ne ho.” (2 Be. 16:9) Ɛwom, Onyankopɔn hui sɛ Asa koma nni mũ, nanso sɛ wokɔ so yɛ adepa a, ‘ɔde n’ahoɔden bedi ama wo.’
18. Sɛ ɛyɛ wo sɛ obiara nhu wo nnwuma pa a, dɛn na ɛsɛ sɛ wokae wɔ Yehowa ho? (Hwɛ mfonini a ɛwɔ adesua yi mfiase no.)
18 Onyankopɔn pɛ sɛ ‘yɛhwehwɛ papa,’ ‘yɛdɔ papa,’ na ‘yɛyɛ papa.’ Yɛyɛ saa a, ɔno nso ‘behu yɛn mmɔbɔ.’ (Amos 5:14, 15; 1 Pet. 3:11, 12) Yehowa hu nneɛma pa a treneefo yɛ na ohyira wɔn. (Dw. 34:15) Yɛnhwɛ Hebrifo mmea baanu bi a wogye awoɔ. Na obiako de Sifra na obiako de Pua. Bere a Israelfo wɔ nkoasom mu wɔ Egypt no, Farao hyɛe sɛ, sɛ Israelni bi wo na ɔyɛ ɔbarima a wonkum no. Nanso na mmea baanu yi suro Onyankopɔn sen Farao, enti wɔkoraa mmofra no so. Yehowa huu mmea yi nnwuma pa, enti “akyiri yi ɔma wonyaa mmusua.” (Ex. 1:15-17, 20, 21) Ɛtɔ da a ɛbɛyɛ yɛn sɛ obiara nhu yɛn nnwuma pa, nanso nneɛma pa a yɛyɛ no Yehowa ani tua, na obetua yɛn so ka.—Mat. 6:4, 6; 1 Tim. 5:25; Heb. 6:10.
19. Ɛyɛɛ dɛn na onuawa bi hui sɛ Yehowa ani mpa nnwuma pa a yɛyɛ so?
19 Onuawa bi a ofi Hungary a ɔte Austria hui sɛ Onyankopɔn ani tua ne nnwuma pa nyinaa. Da bi onuawa yi nsa kaa address bi sɛ ɔnkɔhwehwɛ Hungaryni bea bi ne no nsua Bible. Onuawa no antwentwɛn ne nan ase koraa na ɔkɔɔ ɔbea no fie, nanso wanto obiara. Ɛtɔ da bi a na wagyaw nhoma wɔ hɔ. Da bi wɔ hɔ nso a, ɔkyerɛw lɛtɛ ne ne tɛlɛfon nɔma de to hɔ. Ɛtɔ da a ɛyɛ no sɛ obi wɔ hɔ nanso obom a obiara nnye so. Ɔkɔɔ hɔ toatoaa so saa afe biako ne fã. Afei da bi a ɔkɔɔ hɔ no, ɔbea bi de serew hyiaa no ka kyerɛɛ no sɛ: “Mesrɛ wo bra mu. Makenkan biribiara a wugyaw wɔ fie ha no, na meretwɛn wo.” Asɛm no ara ne sɛ yare nti, na ɔbea no aka mpa mu, na na ne ho mmae no sɛ ɔne afoforo bɛkasa. Onuawa no ne ɔbea yi fii ase suaa Bible. Anokwa, onuawa no brɛ anyɛ kwa; Onyankopɔn hyiraa so!
20. Sɛ wuhu sɛ Yehowa ani wɔ wo so a, ɛka wo sɛn?
20 Yehowa hu wo nnwuma pa, na obetua wo ka. Onyankopɔn ani wɔ wo so, nanso ɛno nkyerɛ sɛ n’ani di w’akyi te sɛ afiri bi a esi baabi rehwɛ nea woreyɛ. Mmom Onyankopɔn dwen wo ho na ɔpɛ sɛ esi wo yiye, enti ka bɛn no.
^ nky. 14 Onua Klein asetenam nsɛm baa October 1, 1984, Ɔwɛn-Aban (Borɔfo de) mu.